नेताको छातीमा किन टाँसियो ‘हामी यहाँ छौ’ ? यस्तो रहेछ कारण – Nepal Press
नेताको छातीमा किन टाँसियो ‘हामी यहाँ छौ’ ? यस्तो रहेछ कारण
२०७७ पुष १० गते ११:१९
काठमाडौं । ‘हामी यहाँ छौं’ शुक्रबार माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा नेताहरुको छातीमा यही बेहोराको प्लेकार्ड टाँसिएको थियो । तर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरुको भीडमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र विभाजित नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र देखिए । सबैले किन यस्तो प्लेकार्ड भिरेनन् ? यसको अर्कै कारण छ ।
संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड पक्ष औपचारिक रुपमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलाे दिन हो शुक्रबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले ‘संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपाका नेताहरुको छातीमा लेखिएको नारामा धेरैको ध्यान गयो ।
‘बहुमत हामीसँग छ, संसदीय दलमा होस् वा केन्द्रीय कमिटीमा । त्यसैले संसद मरेको छैन, हामी मरेका छैनौं’, प्रचण्डले भनेका थिए । उनले हामी जीवितै छौं भनेर सर्वाेच्च अदालतमा पनि जाने बताएका थिए ।
#प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष
प्रकाशित: २०७७ पुष १० गते ११:१९